Kaonty Twitter Tsy Fantatra Anarana Nitarika Fihetsiketsehana Goavambe
Voadika ny 08 Novambra 2012 9:40 GMT
Taorian'ny nanatrehany fihetsiketsehana goavana indrindra, niantso ho amin'ny hetsika hafa indray ireo tsy fantatra anarana mpikarakara ny “Diaben'ny Fahamendrehana”. An'aliny no tonga tao amin'ny faritr'i Mishref sy Sabah Al-Salem mba hanohitra ny fanovana ny lalàm-pifidianana ataon'ny fitondrana Koesiana, ka kandidà iray sisa no azon'ny olom-pirenena fidiana fa tsy efatra toy ny teo aloha intsony. Tsy hitan'ny mpanao fihetsiketsehana ho mifanaraka amin'ny lalamoanorenana ny didy navoakan'ny Emira ka mieritreritra izy ireo fa natao ny lalàna vaovao mba ahazoan'ny fitondrana tombony amin'ny fifidianana hoavy amin'ny Desambra sy hampalemy ny mpanohitra izay nahazo ny ankamaroan'ny seza tao amin'ny antenimiera tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Tahaka ny diabe teo aloha, setroka sy baomba mandatsa-dranomaso no nisetra ny fihetsiketsehan'ny Alahady [4 Nov 2012] ary mpanao fihetsiketsehana maromaro no voasambotra, izay noafahana avy eo.
Hifandona amin'i Koety ve ny Jordaniana?
Herinandro maromaro izay, mpisera Twitter antsoina hoe Mujtahidd nisioka momba an'i Jordania izay nandefa tafika hamoritra ny mpanao fihetsiketsehana Koesiana. Nahazo hafatra avy aminà solombavambahoaka Salafista, Walid AlTabtabai ity mpisera Twitter malaza sy mahabe adihevitra ity mba hisioka ilay vaovao. Andro vitsy lasa, nandritra ny hetsika, nanao kabary niteraka adihevitra ity solombavambahoaka taloha sy mpitarika ny fanoherana Musalam Al-Barrak. Nampidirina am-ponja ity solombavambahoaka ity tamin'ny herinandro lasa noho ny fanalam-baraka ny Emira nataony saingy noafahana ihany izy roa andro taty aoriana noho ny fihetsiketsehana goavana ho fanohanana azy.
Valiny avy amin'ny Emira
Noho ny hetsika goavambe, miandry ny Emira ny vahoaka mba hanafoana ity didim-panjakana ity izay nahatonga izao diabe izao. Na dia izany aza, nanao kabary ny Emira tamin'ny Alatsinainy ary nilaza fa tsy hanafoana ny didim-panjakana mihitsy izy ka anjaran'ny antenimiera hoavy no manova ilay lalàm-pifidianana. Nanambara ihany koa izy fa nahazo fanohanana avy amin'ny Vondro-Pirenena manamorona ny Helodrano eo amin'ny fiarovana ny firenena. Ity lahatsarin'ny kabariny (nalefan'ilay bilaogerar AlZiadiq8)
Azia Afovoany sy Kaokazy 15 ora izay